နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့်နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များအိပ်ရာမှနိုးထသင့်ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့်နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များအိပ်ရာမှနိုးထသင့်ပြီ
Posted by hnin sai on Jun 14, 2012 in Copy/Paste | 10 comments
မင်းအဖေကရေး မင်းကလိုက်ဟောင်ပေး ဟန်ကျသကွာ။
မနေနှိုင်တဲ့ ငါတို့ကပဲ ငပွကြီးဖြစ်။မင်းကမိန်းကလေးဆိုရင် အားနာပေမယ့်
ငါ့က မရိုင်းချင်ဘူး အေးလာတော့မစပါနဲ့။
OMG …. how could u expose this idea ?. But u know no one will follow u coz u wrote the right anyways thank fri just thumb up… for ur profit , dont reply the against comments with anger.
coz justafew days ago ralated with rakhine violence , i saw alot of senseless comments , insults and low standard mannors.
Try ur best like my bro said above …
But one things is that… why rangoon should realted with that crime?… this is the most ugliest rumours that imposed byahandful people who dont wanna see the peace betweeeen muslim and Buddhism.
I would like to say that we should feel with brain not with heart.. directed to all the people in ygn.
May all in peace
hnin ကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းရသလောက်တော့ ရခိုင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ရခိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲ အသားထဲကလောက်ထွက်တဲ့ရခိုင်ပါပဲ ။ ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ စစ်တပ်ကိုရန်တိုက်စရာမလိုပါဘူး ။ hnin အနေနဲ့ စစ်တွေမြို့ကိုသွားလောက်ခဲ့ပြီးမှ ဒီသတင်းကိုတင်တာလား ။ မာရှလောထုတ်ထားပေမယ့် စည်းကမ်းမလိုက်နာပဲ ညဘက်မီးရှို့တဲ့ကောင်တွေက ဘယ်ကကောင်တွေလဲ ။ စစ်တပ်ကရှို့တယ်ဆိုတာသက်သေပြနိုင်လား ။ ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောပါနဲ့ ။ ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာ အခင်းဖြစ်ပွါးပြီး ကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်ကိုကိုယ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမှ ဓါတ်ပုံထွက်ရိုက်ကြတာပါ ။ အဲဒီအချိန်မှာလုံခြုံရေးမရှိလို့ မီးရှီုု့တဲ့ကောင်တွေက ငုတ်တုတ်ထိုင်နေမှာလား ။ စစ်တပ်က ဘင်္ဂလီအိမ်တွေ၊ ရခိုင်အိမ်တွေကို မီးရှို့နေတဲ့ ဓါတ်ပုံကိုသက်သေပြနိုင်တဲ့နေ့ hnin ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာပြီး ထိုင်ရှိခိုးမယ် ။ ကျေနပ်ပြီလား ။ သက်သေမရှိပဲ သတင်းတွေကိုမဖွနဲ့။ တောင်ကုတ်မှာ အရက်အလကားတိုက်တယ် ဆိုတဲ့သတင်းကို တိကျတယ်ဆိုရင် တိုင်ပါလား ။ ဘာလို့ငြိမ်ခံနေတာလဲ။ အဖြစ်မှန်ပေါ်အောင်ဖေါ်ထုတ်ပါလား ။ မန်းလေးဂေဇက်က နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမဟုတ်ဘူး ။ တိကျတဲ့သက်သေတွေရှိရင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကို တက်တိုင်ပါ ။ မန်းလေးဂေဇက်မှာလာပြီး ရန်မတိုက်ပါနဲ့ ။ လောကကြီးမှာ အားလုံးသူ့တရားကိုသူစီရင်နေတာချဉ်းပဲ ။ ခု hnin ရေးထားတဲ့ပိုစ့်က ရခိုင်တွေကိုမုန်းလို့ စစ်တပ်နဲ့ရန်တိုက်ပေးနေမှန်းသိသာတယ် ။ ဧည့်သည်ဆိုတာ ဧည့်သည်လိုနေရတယ် ။ အိမ်ရှင်ကိုလာပြီးစော်ကားရင် ………. အိမ်ရှင်ဆိုတာ အိမ်ရှင်ပါပဲ ။ ဟောဒီရခိုင်ပြည်နယ်က မြေကြီးတွေထဲမှာ ကျွန်တော့် ဘိုးဘေးဘီဘင် အစဉ်အဆက်ရဲ့ အရိုးတွေ မြှုပ်ထားခဲ့တယ် ။
ွနော်၊နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားတွေနဲ့၊ရိုဟင်ဂျာမပါဘူးဒါတောင်ပုံမပါလာဘူး၊အခုလဲဒီလို့ပါဘဲ . . .မြန်မာတွေအယုံလွယ်တယ်၊ပြောသမျှယုံတယ်၊သွေးဆူတတ်တယ်တဲ့၊ဒါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်
အင်း ဆရာဝေးရေ—-အဲ့သူငယ်မလဲ ဒီစာတွေဘဲထပ်တင်နေပုံကြည့်ရတာ တမျိုး ပါလား။
သူ ့ခံစားချက်နဲ ့သူရှိပါစေဗျာ။
hnin sai..ဟေ့ကောင် မင်းရေချင်တာတွေလျောက်ရေးမနေနဲ့
လူနည်းစုပေါ့ ( ဒေါ်စုတောင်မျက်စေ့လည်ပြီးလူနည်းစုလို့ပြောတာတွေ့ရတယ် )
တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်နယ်မှာ လူအများစုက ရခိုင်တွေမဟုတ်ဘူး တဖက်နိုင်ငံက
ွှှအီး အကောင်းဆုံးအကြံပေးမယ်နော် သူတို့ကိုအိပ်ရာကစောစောနိးစေခြင်တာများ
နိးစက်ဝယ်ပေးလိုက်ပြီးကောကို လက်ညောင်းခံနေသေးတယ် ဒို့ကတော့ ၁ဝ မှတ်ယူဖို့ချောင်းနေတာ
ပွိုင့် ၁၀၀၀၀ဝ ပြည့်ရင် သူဂျီးဆီက ပိုက်ပို်က်ထုတ်ပြီး သမတကို နိးစက်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်
I am sure you areakalar. Yes, Thein Sein Govt is handling this case with very care as they do realize you, terrorist kalars have got well planned attack on Rakhine/Myanmar. If you know your Bangladeshi Govt has already confirmed that Rohingya were in contact with Jamaat e-Islami group and planned this attack since last six months back. Who said they were Burma from Taungdwin Gyi. They were fucking kalars like you with NRC issued by corrupted Immigration people. Don’t worry, Auntie Su also has mentioned you kalars as illegal immigrant… So, stop bullshitting about Rakhine/Myanmar or Govt…
လူ မျိုး ရေး လား ဘာသာ ရေး လား တိုင်း ပြည် ပျက် နေပြီ လား ကျုပ် တော့ ဘာမှ ခွဲ ခြား သိတော့ ဘူး ဥ ပဒေ အထက် မှာ ဘယ်သူ မှ မရှိတာ ကောင်းပါတယ်။အရပ် ဆယ် မျက် နှာ အနန္တ သတ္တဝါ တွေကို မေတ္တာ ပို ့ကြရအောင်နော်။ အားလုံး -နှလုံးစိတ် ဝမ်းအေး ချမ်း ကြပါစေ ။ လူ အချင်း ချင်း ညှင်း ပန်း နှိပ်စက် ခြင်း ကင်း ဝေး ကြပါစေ။
သာဓု သာဓု ။